အကြင်နာနန်းတော်: ယောက်ျားများကို အန်စေသော မိန်းမ
၂. ဆံပင်ရှုပ်ပွပြီး လက်သည်းများ မည်းညစ်နေသော မိန်းမ
၉. တပျစ်တောက်တောက် ရွတ်တတ်ပြီး ဖြတ်ထိုးဥာဏ်နည်းသော မိန်းမ
၁၀. မျက်စိကို ဓာတ်လွှတ်နေသကဲ့သို့ ညှို့ကစားတတ်သော မိန်းမ
၁၄. ခြေသလုံးတုတ်ပြီး စကပ်တို ၀တ်တတ်သော မိန်းမ
၂၁. သူငယ်ချင်း ချစ်သူရည်းစားကို ထမင်းမဖိတ်ကျွေး လက်ဆောင်မပေးဖူးသော မိန်းမ
၂၃. ယောက်ျားအများကို တုံးအတဲ့ တဏှရူးတွေဟုထင်သော မိန်းမ
၂၅. အချိန်းတွေ့ ခံချင်ပြီး ချိန်းတွေ့ရင် ပျက်ကွက်တတ်သော မိန်းမ
နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ စာစုလေးကို ကြိုက်လို့ ပြန်မျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်